Home > Nandeha lamasinina > Soa azo Solar Powered lalamby Niampita teo famantarana Ary Road Signs
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 31/03/2020)
Koa satria sarotra ireo fametrahana ireo tsy miraharaha, izy ireo kokoa ny fanentanana ny mpamily sy ny mpandeha an-tongotra eo amin'ny roundabouts, amin'ny toerana fijanonan'ny fiara, faritra mampidi-doza izay fantatry ny antony loza, sns. Ny zava-misy fa tsy mila herinaratra tariby, na ny loharanom-baovao teo akaiky teo mba miasa dia ahafahana hametraka azy ireo na aiza na aiza, afa-tsy ny zava-misy fa tena izy ireo mora ary ny iva-fikojakojana. Ny soa azo fanampiny ny zava-misy izy ireo dia mora ny hametraka - dia azo ampiarahina ny maharitra na lahatsoratra na portable anankiray ho lehibe mivezivezy. Izany no mahatonga azy ireo be nandritra ny mpanao lalana nandalo, amin 'ny mety hatao ka nesorina tamin'ny saika tsy misy fotoana sy tsy mahatonga fanelingelenana ny teo akaiky teo footpaths.
Niampita lalamby masoandro famantarana izay mampiasa angovo azo ampiasaina amin'ny indostria na faritra sy ambanivohitra. Vokatra toy izany, toy ny https://www.solarlightingitl.com/solar-railroad-crossing-systems/ detect approaching trains by virtue of wireless sensors, ary indray mandeha izy ireo mahazo ny tsato-kazo famantarana, izy ireo hampavitrika ny sisintany jiro sy ny feo izay mandeha mandra-fiarandalamby efa lasa, ary dia azo antoka ny hiampita ny lalamby. Ireo famantarana matetika mandeha tsiroaroa teo an-daniny ny fiaran-dalamby fiampitàna, ary ny Wireless rohy Switches azy ireo ary eny miaraka amin'izay koa,. Angamba ny zavatra tsara indrindra momba ny fametrahana ireo dia ny zava-misy fa tsy misy ivelany boaty na telegrama lava anjara.
Na dia angovo maitso dia tsy tanteraka nampidirina ho ao an-fiainan'ny olona eo ho eo mbola, dia afaka mahita ny fanatrehany sy ny fampiasana mitombo ny minitra, miditra bebe kokoa ny tontolon'ny 'ny fiainana. Izany dia marina ny hoavy ny tany sy maneho ny tontolo iainana-mahalala fomba tsy dia mandamaka handroso bebe kokoa hanisy ratsy ny marefo sy mihantahanta fifandanjana eo amin'ny natiora izay efa nisy fiantraikany mafy ny Olona iray. Solar-Powered lalana sy ny lalamby vahaolana no ohatra tsara azo ampiharina, marani-tsaina sy ny fampiharana lafo be harena voajanahary.